ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ: February 2011
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ အပိုင်း ၆
မြတ်စွာဘုရားသည် မုန်းတီးမှု၏အကျိုးတရားများကို ကောင်းစွာ သိနားလည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မုန်းတီးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့၏ ဘဝကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသောသူတို့ကို မြတ်စွာဘုရားမြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် '' မုန်းတီးမှုကြောင့် မုန်းတီးမှုသည် မပြီးဆုံးနိုင် '' '' သင်အမုန်းပွါးလေလေ အခြေအနေပိုဆိုးရွားလေလေ'' ဖြစ်ကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။
သင်ကကျွန်ုပ်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုပိုမုန်းလာ၏။ ဤသို့ဖြင့် မုန်းတီးမှုက တဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာရာ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းမုန်းတီးမှုဟူသော မီးလောင်တိုက်တွင် လောင်မြိုက်ခြင်းခံရသည်အထိဖြစ်၏။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ တဘက်ဘက်က အမုန်းပွါးမှုကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မြင်တော်မူ၏။
တဘက်ဘက်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်စေ၊ မုန်းတီးမှုကိုမိတ်ဖြစ်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မှုနှင့် အောင်နိုင်အောင်မကြိုးစားလျှင် ဤမုန်းတီးမှု အစဉ်အတန်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ၊ စာမျက်နှာ ၅၅-၅၆)
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ နောက်ဆက်တွဲ အပိုင်း ၆
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ကုလ္လသမဂ္ဂမှကြီးမှူး၍ဖွဲ့စည်းထားသော ကုလ္လသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံးကရှိနေသည်။ ယင်းသည်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးရာဒေသအထိကွင်းဆင်းကာ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရုံမကအတော်ကြာသည်အထိ ယင်းဒေထွန်းတွင်ဝင်ရောက်စောင့်ကြပ်ပေးသည်။ ဥပမာ-ရိုဟင်ဂျာ၊ ဘော့စနီးယားကိစ္စကိုကြည့်ပါ။ ဤဖော်ပြပါအချက်များသည် ကျွန်တော်တို့၏ ရိုးသားလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသိရှိရန်ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူများမြှောက်ပေးတိုင်းလိုက် '' က '' လျင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသာလျင်ပြိုကွဲပျက်စီးရမည် မလွဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးပြုရမည့်အချက်သည်ကား နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး မပြိုကွဲရေးပင်ဖြစ်သည်။
'' အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ'' စာတမ်းတွင် အချို့သောအချက်အလက်များသည် မူဆလင်တို့ကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အရေးတောင်းရန် တဖက်မှလှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်မှစ၍ ယနေ့အထိ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် ၃.၈% ရှိသည်ဟု သိရသော်လည်း '' မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ '' တွင်မူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဦးရေသည် ၂၀ % ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ၅၀ % သို့ရောက်လာလျင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ဤနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသကဲ့သို့ သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မူဆလင်တွင်သည် ဟိန္ဒူများကို ကျော်သွားလိမ့်မည်ဟု ရေးသားထားသည့်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေသည်။ အချို့အချို့သော စာရင်းဇယားများသည် နိုင်ငံတော်၏ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်၍ပြင်ပသို့ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအချက်ကို စာတမ်းပြုသူများ တကယ်ပင်နားမလည်ကြခြင်းလော။ သို့တည်းမဟုတ် ငနားမလည်ချင်ယောင်ဆောင်နေသလောဟု စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံရေးအနှောက်အယှက် ပယောဂမကင်းဟု ယူဆရမည်ပင်။
ဤကဲ့သို့သော ရေးသားချက်၊ ထိုးနှက်ချက်များကြောင့်ပင် ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံသည်ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ဘော့စနီးယားနိုင်ငံ၊ တဖန် ကိုဆိုဗိုကို ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံပြိုကွဲရခြင်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ဆာ့ဗ်တို့၏ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုသည်မှာ ယင်းနိုင်ငံ၏နယ်နမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝမှုနှင့်ဆိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့်လူမျိုးမှ အခြားလူမျိုးကိုကျွန်ပြု၍မရနိုင်ပါ။ သို့ပါ၍မေတ္တာဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ နောင်တော်ကြီးစိတ်ဓာတ်မွေးမြူကာ လူမျိုးစုညီငယ်လေးများကို သနားညှာတာသွားမည်ဆိုပါလျှင်မူ လူမျိုးစုငယ်များသည် အစ်ကိုကြီးနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်ပါသွားမည်မှာ မုချအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုရှိနေသော မူဆလင်များသည် ဗမာလူမျိုးကိုမှပို၍အထင်ကြီးကြသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ဗမာကဲ့သို့ ဝတ်စားနေထိုင်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူကြသည်။ သူတို့ကို ကုလားခေါ်ခြင်းထက် မြန်မာမူဆလင်ဟုခေါ်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့တိုက်ပုံကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့ သူတို့ဘာသာအမည် အီစွတ်၊ ကာဆင်နှင့်ဆက်ပြီး ကိုတင်မောင်၊ ကိုခင်အောင်ဟု ရေးသားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ယင်းသူတို့သည် ဗမာလူမျိုး၏ နောက်ဆက်တွဲ အင်အားဖြစ်လာသည်။
ပြည်နယ်များတွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အစိုးရကသူတို့၏ ဦးရေကို ဗမာလူမျိုးစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြကြသည်။ မိမိတို့ကို ခင်တွယ်သောသူတို့တွင် မကောင်းသောလက္ခဏာများရှိသလားဟု မေးစရာရှိသည်။ သူတို့သည်္ခမူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရက်သေစာများကို ရောင်းချခြင်းမရှိ။ သူတို့သည် ဘိန်းဖြူကဲ့သို့ မကောင်းသောအလုပ်များကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခြင်းလည်းမရှိ။ စီးပွါးရေးတွင် Monopoly ဟုခေါ်သောထိပ်ပိုင်းမှ ချုပ်ကိုင်ခြင်းလည်းမရှိ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောကြသေးသည်။ ယနေ့ကာလတွင် ကုလားမများကို အခြားသူတို့အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးကောက်သကဲ့သို့ ဗမာအမျိုးသမီးများကိုလည်း ကုလားများကယူကြသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအိမ်ထောင်ရေးသည် ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိကြောင်းကို နှစ်ဖက်စလုံးကသိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သဘောတူအချင်းချင်းသာယူကြရေးကို အထူးပြုနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 8:45 AM
Labels: အသိနှင့် သတိတရား
ကျနော်တို့ မြေကြီးရဲ့ မြေအောက်အလွှာတွင် ရွေ့လျှားမှုအကြောင်းလေ့လာကြတဲ့
ဆိုက်ဗေးရီးယားနယ်စွန်တစ်နေရာတွင် မြေအောက်ဆိုက်စမစ်တူးဖော်နည်းနှင့် တူးခဲ့ကြပါတယ် ။
စတော့တာပဲ။ ပူးပေါင်းတွင်းတူးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက်ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ
ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တွင်းအနက် ကိုးမိုင်ရောက်တဲ့အခါ တွင်းတူးတဲ့ပိုက်
ဟာ ထိန်းမရအောင်တုန်ခါလာတာကိုတွေ့ ရှိရပါတယ် ။ ဘာကြောင့်တုန်ခါသလဲဟုစစ်ဆေးကြ
တဲ့အခါ တွင်းတူးပိုက်ထိပ်ပိုင်းဟာ လေဟာနယ်လို တွင်းခေါင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်
နေလို့ထိမ်းမရအောင်လှုပ်ရမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ ရှိပါတယ်
အဲဒီအခါမှာတော့လုံးဝမခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်တယ်လို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့အသံကို
စတင်ကြားရပါတယ်။ပထမတော့သူတို့ ရဲ့တွင်းတူးစက်နဲ့ပိုက်လုံးတွေနဲ့ မြေလွှာတွေရဲ့
တုန်ခါမှုအသံဟု ထင်မှတ်ထား ကြပေမဲ့ သေချာစူစမ်းပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာတော့
အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ ကဆိုပါတယ်။ သေချာအောင်လို
သဲသဲကွဲကွဲစတင်ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအသံနဲ့ အတူလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ
သို့ မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အော်ဟစ်ငြီးငြူနေကြတဲ့အသံကိုလဲ
ဒါဟာငရဲကိုတွေ့ ရှိခြင်းလို့ သူတို့ ခံယူထားလိုက်ကြတယ်။ အနိဌာရုံတွေနဲ့လူ
့လောကကိုဆက်ပေးလိုက်ကြပြီးလို့ ထင်မိပါတယ်။“ ကျနော်အခုခင်ဗျားတို
ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ နဲ့ တွင်းတူးအဖွဲ
့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ် အသက် ၆၅ နှစ်တို့ ရဲ့
ဆက်စတီးယားဆိုတဲ့ လစဉ်ထုတ်စာစောင်ကရေးသားဖော်ပြကြတယ် ။
ဒီကျနော်တို့ ကမာမြေကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ သိပ်ကိုပူလောင်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အခုကျနော်တို ရောက်နေတဲ့ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့တောဟာ ဖာရင်ဟိုက်အပူချိန်ဒီဂရီ
ဟိုက် 2000 ရှိတယ်လို့ တွက်ချက်သိရှိရတယ် ။ သူတို့ မူလခန့် မှန်းထားတဲ့အပူ
ချိန်ထက် ဆယ်ဆလောက်တောင်များနေတယ်လို့ တွင်းတူးအဖွဲ
့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ် ကဆိုပါတယ်.။
ဘာနီနန်မီဒယ်နှင့်ဘူမိဗေဒပညာရှိချုပ် တို့ ဟာ
အော့ဘရမ်းဘတ်စတိုက်ကီး ဆိုတဲ့သတင်းစာကြီးက 1990ခုဇန်န၀ါရီလ4ရက်နေ့ မှာ
ဒီကမာကြီးရဲ့အောက် ကိုးမိုင်းအကွာမှာ ငရဲပြည်ဆိုတာတကယ်ရှိနေပြီ
တွင်းတူးတွေ့ ရှိချက်အရ ငရဲပြည်ရဲ့ ဂိတ်ပေါက်တံခါးဝပဲဟု ရေးသားခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုတွေ့ ရှိမှုတွေပြီးတဲ့ နောက်မှာ နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ 
အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ရပ်က သူတို့ ငှားရမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားသား
အားလုံးကို. တွေ့ ရှိချက်အပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာ
ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွင်မထားတော့ပဲ. ပြည်ပကိုပြန်ပို့ လိုက်ကြပြီး
အလုပ်ကနှုတ်ထွက် ခိုင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာ
ဆိုဗီယက်အာဏာပိုင်တွေဟာ လာဒ်ထိုးမှုတစ်ခုနှင့် ဖြေရှင်းလိုက်ကြတယ်။
့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ်ကိုမေးလို့ မရခဲ့ပါဘူး။
ခန့် မှန်းရသလောက်ကတော့တစ်ဦးစီကို သိန်းဂဏန်းလောက်ပေးပုံရတယ်လို့ 
လှူဒန်းလိုက်တယ်လို သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းပေါက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့သူ
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးရဲ့ အထူးအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်လဲဖြစ်တယ် ။
စာရေးတဲ့ နေ့ စွဲက ၁၉၉၀ခု ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့ 
သူ့ စာထဲမှာရေးခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၉ ခု ခရစ်စမစ်ရုံးပိတ်ရက်မှာသူက
တွင်းတူးရင်းနဲ့ဟောင်းလောင်းပေါက်ဟင်းလင်းပြင်ကိုတွေ
ဒါပေမဲ့မကြာပါဘူး ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ
သူဟာအရမ်းအံ့သြတုန်လှုပ်မိပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ ကို
ဘုရားသခင်ထံမှာအပ်နှံကြောင်းနှင့် လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားပေးကြပါလို့ 
ကျမ်းည္မန်း။ ။အကုသိုလ်နှင့်ငရဲပြည်ဟူသောစာအုပ်မှ ဘာသာပြန်သူ
လွမ်းခြင်း၏တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ နေသာနေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ရှိသည်။
သည်ဆောင်းပါးအတွက် သူငယ်ချင်း ဇော်လင်း အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မရှိဆင်းရဲပြည်သူ့အကောက်ခွန်စား အချို့စစ်သည်တော်များ၏ အရေးအသားများမြင်ရခြင်းဖြင့် ဩ ယခုခေတ်လူတွေများ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဆဲလိုဆဲ၊ နောက်ချင်သလိုနောက် ဘုရားရှင်၏ ဆုံးမ တရားများပင်မသိကြတော့ပါလားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ လူတိုင်းက ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ သမာအာဇီဝနဲ့လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်မဟပ် ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံလို့ရေးတာကိုက လူတစ်ဘက်သားတွေကိုစွပ်စွဲနေတာဖြစ်နေပါပြီ။
လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတဲ့ပြည်သူတွေမှာလည်း အူမ မတောင့်တော့ သီလလည်းမစောင့်နိုင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြပြီးအာဏာရှင်တွေကိုအမျက်ထွက်နေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဘယ်ယူနီဖောင်းဝတ်ဝတ်၊ ဘာဝတ်စုံဘဲဝတ်ဝတ် ညီနောင်တွေပါ။
အကုသိုလ်နည်းအောင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမေတ္တာတရားထားကြပြီး ရင့်သီးမှုတွေလျှော့ကြမယ်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြမယ်၊ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်လို့ ငါးပါးသီလကိုစောင့်ထိန်းကြပါစို့လားခင်ဗျား။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 5:53 PM